Toddobaadka iyo sawirrada qaaradda Afrika | Saxil News Network
July 28, 2018 - Written by editor
Image captionWaxay ahayd Talaadadii, haweeneydan waxay dusha ka saarantahay Dameer ay weelal biyo ah ku raran yihiin, waxay joogtay magaalada Mornaguia oo 15 kilomitar oo jirta magaalada caasimadda ee Tunis.
Image captionHalkan waa magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali, waa ganacsato ku sugan goob laga raaco baaburta si ay rakaabka wax uga gataan.
Image captionWaa tageerayaasha madaxweynaha Mali Ibrahim Boubacar Keita oo ku sugan caasimadda dalka Gabon, madaxweynaha Mali ayaa olole ugu jiraa sidii uu soo hanan lahaa codadka qurba joogta dalka Mali si ay ugu codeeyaan doorashada.
Image captionAbel Kapodogo wuxuu ku takhasusay cilmiga bulshada wuxuu Moos ku iibinaya wadda Robert Mugabe oo ku taalla caasimadda dalka Zimbabwe, wuxuu qabaa dharkii uu jaamacadda kaga qalin jebiyay sii uu dibadbax uga muujiyo shaqo la’aanta dalkaasi ka jirta.
Image captionWaa haweeney telefoonkeeda ku isticmaalaysa agagaarka xarunta shirkadda Google ee dhawaan laga furay dalka Nigeria.
Image captionCabdishakuur Maxamed waa 16 jir, waa qoraa, wuu gacanta ku haystaa buug uu isaga qoray, wuxuu 21-kii bisha July buggiisa uu kusoo bandhigay carwada buugaagta ee magaalada Hargeysa.
Image captionWaa gabar yar oo ku caayaraysa xeebta magaalada Masawa ee ku taalla Badda Cas dalka Eritrea.
Image captionWaa qaar kamid ah alaaba guriyaha lagu soo sameeyay oo lagu soo bandhigay magaalada Caoe Town ee dalka Koonfur Afrika.
Image captionWaa dad sawir la galaya taalada loo sameeyay madaxweynihii hore ee Koonfr Afrika Nelson Mandela oo ku taalla magaalada Cape Town.